Tag: ọdịnaya echiche generator | Martech Zone
Tag: ndenye jenerato
Isi okwu, biputere aha, aha, isiokwu… ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ha, ha bụ ihe kachasị mkpa na ọdịnaya ọ bụla ị nyefere. Olee otú ọ dịruru mkpa? Dị ka nke a Quicksprout infographic, ebe 80% nke ndị mmadụ na-agụ a isiokwu, naanị 20% nke na-ege ntị n'ezie clicks. Mkpado aha dị oke mkpa iji nyocha njikarịcha na isi akụkọ dị mkpa iji mee ka ọdịnaya gị kesaa na mgbasa ozi. Ugbu a ị matara akụkọ dị mkpa, ị nwere ike ị na-eche ihe